Sarudzo yeUNWTO Yangoitwa Alain St. Ange Millionaire
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hurumende Nhau » Sarudzo yeUNWTO Yangoitwa Alain St. Ange Millionaire
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Izvo zvese zvakatanga nemufaro tsamba munaKurume 23, 2017 muBerlin kuITB Basa, apo Seychelles Gurukota Rezvekushanya Loustau-Lalanne achitsigira vaimbova Gurukota St. Angese seMumiriri wechitsuwa cheMunyori Mukuru weUNWTO pamberi paTaleb Rifai ari kubuda UNWTO SG.
Chikamu chakakura chenyika chakabatana mukunzwisisa iyo UNWTO Sarudzo yeSeretary muna 2017 haina kupedzisa nenzira yainofanirwa kuve nayo. Kubiridzira, huwori, kukanganiswa uye zvimwe zvakawanda zvakataurwa panguva yekuchengetedza chinzvimbo chiripo cheUNWTO Secretary General Zurab Pololikashvili
Mumwe wevaikwikwidza kukwikwidza chinzvimbo ichi panguva iyoyo aive VaAlain St. Ange. Haana kutora zvakaitika kwaari seakapihwa. Makore mana gare gare dare repamusoro-soro rekukwirira mudunhu rake reSychelles rakamupa mamirioni manomwe eSeychelles Rupies kana kufungidzira $ 4 mukukuvadzwa uyu China.
Vazhinji vari munyika zvino vanobvunza kuti UNWTO ingadai yakafambira mberi sei kuburikidza nedambudziko reCOVID nemutungamiri akasiyana anotungamira?
The UNWTO Chokwadi chingave chiri pachena, midhiya-inoshamwaridzika, uye yakavhurika kune yakazvimirira chikamu neese nhengo dzehurumende dzeUN-yakabatana agency.
St. Ange akamhan'arira mhosva kuSeychelles muna Gumiguru 2017 mushure mekunge arambidzwa nehurumende yake kuti amire musarudzo yeUNWTO. Yakafara mazuva maviri pamberi pesarudzo panguva yemusangano weUNWTO Executive Council muMadrid. Izvo zvaive zvisingatarisirwe uye yaive poindi yekunyadziswa kukuru kune Musarudzo St. Ange, vatsigiri vake, uye aimbova Secretary-General Rifai nevamwe vazhinji.
Akapa hurukuro yekunzwa pamberi pesarudzo iye aisatenderwa kukwikwidza zvakare.
Emotional Speech naAlain St Ange kuUNWTO Executive Council mu2017 mushure mekuregererwa seUNWTO Mumiriri
Alain anoda mutori wenhau, anoda vanhu uye mutsigiri mukuru webazi rekushanya nekushanya. Paaive gurukota rekushanya kuSychelles akatanga iyo Victoria Carnival, chiitiko chakaunza macarnival nevashanyi kubva kumatunhu ese epasi kuchitsuwa chidiki ichi. Mhemberero, iyo yakaratidza kubva kuTrinidad, Nottingham, Cologne kuenda kuRio de Janeiro muSychelles vachiri kutaura nezvazvo.
Nehurombo, St. Ange haana kumbowana mukana wekuvhoterwa nenhengo dzenyika dzeUNWTO.
Africa yaive kuwana kupera kupfupi kwetsvimbo kwaive kunetsekana kukuru panguva yesarudzo, uye yakashanduka ikava chokwadi chinosuwisa sekureva kwevazhinji.
Kudzoka muna2017, vatungamiriri vaviri vemuAfrica vaiedza kuunza Africa padanho repasi rose rekushanya: Dr.
African Union yakatsigira Dr. Mzembi semumiriri we Africa, yakasimbiswa neSeychelles panguva iyoyo. Nevaviri vakakwikwidza kubva kuAfrica, mikana yekuti Africa igovere mumwe wavo seSecret-General yakava chinetso chaicho.
Zimbabwe pasi paVaMugabe yakamanikidza African Union kumanikidza Seychelles kuti isabvumidze Alain St. Ange kukwikwidza. Iko kumanikidza kuSychelles kwaive kwakakura uye kwakatyisidzira masanctions eAfrica.
Hurumende yeSychelles yakapa mumaminetsi mashoma pamberi pesarudzo uye nechisimba yakabvisa St. Ange kubva pasarudzo.
Uku kwaive kunyadzisa kukuru kune Musarudzo St. Ange, asiwo UNWTO, uye kutendeka kwesarudzo. Nehurombo, ichi chaingova chimwe chete kubva mumatambudziko mazhinji ezviitiko zvinotyisa izvo zvakazopedzisira zvasimbisa mumiriri weGeorgia saMunyori Mukuru weUNWTO General Assembly kuChengdu, China.
Africa yaive nekamuti kapfupi kubva pakutanga, kutanga muna2017 apo eTurboNews akanyora kuti: Chinhu chinonhuwa muMadrid.
Mukupedzisira, Mzembi akazosvika kunhamba yechipiri uye akakundwa naZurab Pololikashvili. Chinyorwa ichi chakange chataura nezve Zurab ichitamba mutambo wakasviba nezvakanaka uye zvipikirwa zvisina mubvunzo zvekuwana mavhoti ake.
Alain St. Ange anopisa nzira yake pachinzvimbo cheUNWTO Secretary General chinzvimbo
Alain St. Ange akanzwa kuti akabatwa zvakaipa nehurumende yake uye haana kumbomira kutaura pfungwa yake. Akamhan'arira hurumende yake uye akakunda. Mushure mekukunda kwake kumatare chikumbiro chakaiswa uye zvino akakunda chakatokura. Izvi zvese zvakaitika nemusi weChina, nezuro.
Dare Repamusorosoro reSeychelles nhasi (Nyamavhuvhu 12, 2021) ratura mutongo richitsigira nyaya yaimbove gurukota rezvekushanya, Alain St. Ange.
Nei Alain St. Ange achizogamuchira 7 Million Rupies yesarudzo yakarasika yeUNWTO?
St. Ange, uyo akashanda nesimba kushandira chinzvimbo chakakonzera kurasikirwa kukuru kwemari munzira mukuedza kuzviita iye wekutanga Munyori Mukuru weAfrica UNWTO.
Sarudzo yekubvisa chigaro chake yakatorwa nehurumende yeSeychelles mushure mekumanikidzwa kwakanyanya kwakaunzwa neAfrican Union iyo yakatyisidzira zvirango zvehupfumi.
Mutungamiriri weSychelles, nekudaro, akadzima kusarudzwa kwaSt Ange apo anga achitopinda musangano weUNWTO Executive Council muMadrid, mazuva maviri sarudzo dzisati dzaitwa.
Mushure mekunge St. Ange adzoka kumba akaenda kudare uye akasimbiswa neDare Repamusorosoro, akatungamirwa naMutongi Melchior Vidot, paakapihwa madhiri mumari inosvika zviuru gumi nemazana matatu nemakumi mairi nepfumbamwe zvemakumi masere nemazana masere emadhora (angangoita US $ 164,396.14)
Mari iyi haina kana kumbobvisa mari yemubhadharo weSt Angels wavakaisa mumushandirapamwe wesarudzo iyi. Akaraira magweta ake kukwikwidza pamusoro pehuwandu hwezvakakuvara chete. Akawedzera zvakare kurwadziwa, kunyadziswa, uye kukuvara kwepfungwa izvo chiitiko chakamukonzera.
Mushure memakore akati wandei, nyaya iyi yakazopedzwa pamberi peDare reKukwidza, iro Dare repamusoro muSeychelles. Ipo Gweta-General raive richitsvaga, pachikumbiro, kuti nyaya iyi ibviswe zvachose, St. Ange akange akurudzira kupokana nehuwandu.
Akataura pachena kuti mari yaakapihwa padare repamusorosoro yaive isingakwani kubhadhara mari yake yekunyora, asi haana kuita zvakati wandei kubhadhara mari yaakange awana panguva yemushandirapamwe.
Gweta-General pakukwidza akaedza, zvisina kubudirira, kuteterera kuti Hurumende inofanira kubatwa kune imwe nhanho yemutemo pane mugari wezviito zvekunyengera.
Pakupedzisira, kana gakava ravo rikabudirira, raizove nemhedzisiro yekuita kuti zviomere mugari kuti aunze Hurumende. Kuve mumwe wekutanga zverudzi rwedu mudare redu, nyaya yaSt Ange nhasi yave nemhedzisiro inopesana nekutevera Kutonga: kuwedzera mukana wekuti vagari vapikise zvisarudzo zvakatorwa nebazi reHurumende.
Dare nezuro rakawedzera mubairo weSt Ange kune madhora anosvika mamirioni manomwe, zvichinyatso kudzorera yakawanda yemari yaakasiya muhomwe munguva yake yemushandirapamwe.
Mari iyi inosanganisira 1 miriyoni rupees mukukuvara kwetsika, imwe yemari dzepamusoro-soro dzinofanira kupihwa mudunhu redu rekukuvara kusiri kwemari kusvika nhasi.
Izvi pasina mubvunzo chichava chiratidzo chekuvimbisa chevanodaidzira kuenda kumberi mune zvakafanana zvikonzero zvekuita.
Mr. St. Angel akaonekwa, zvinonzwisisika, achisiya dare redare nezuro aine mweya wakanaka mushure memakore mana vachirwira nyaya iyi mumamiriro ekupokana, pamwe neboka rake rinofara reSeychellois Attorneys, vanosanganisira Mr. Kieran Shah, Mai Michelle St. Ange-Ebrahim, naVaFrank Elizabeth.
Hurumende yaimiririrwa naVaStephan Knights. Ipo Mr. St. Angeng vachipindirana zvine hushamwari, senguva dzose, nevatori venhau vakaungana, pakanga pasina chekutaura neGweta-General.
COVID-yakachengeteka kufamba inotarisirwa kufambisa mafuta mukufamba kwemotokari
COP26: Iyo Tourism Indasitiri Inoda Kuve Chikamu che ...
Johannesburg kuenda kuLagos nendege neSouth African Airways...
Sachigaro weAfrican Tourism Board muSenegal pa…
Nyowani Expat Visa Sarudzo Inogona Kuwedzera GCC Tourism
TAT Inozivisa Nyowani "Shanya Thailand Gore 2022" paWTM...
Hutano Hwakakura Kutyisidzira kupfuura COVID-19 Kubuda?
Oslo kurwisa kwehugandanga: Mupurisa akakuvara, ane zvombo ...
UNWTO Mhinduro kuKenya: Ndiani anogona kumisa Munyori uyu...
Airbus: 39,000 ndege itsva, 550,000 vatyairi vatsva vanodiwa ...
Kushanya Kwemuchato: Kufema Hupenyu Hutsva muKufamba uye ...
New Premium Sport Compact Mota
Omega Drill yeIsrael inoteedzera kubuda kweiyo nyowani ...